သင်ယူ7ဂရိတ် Apple ကတီဗီ Apps ကပ
Software ကို & Apps ကပ ကသာက iOS
တွင် Turn, Tune ခုနှစ်တွင်ပြီးတော့နယူးတစ်ခုခုသင်ယူပါ
အဝေးသင်သင်ကြားရေးစနစ်များပြီးသားဒီတော့ Apple ကတီဗီများအတွက်ပညာရေးအပ်ဖ်များဖန်တီးခြင်းအထူးသဖြင့်အထဲတွင်ရဲ့ဂေဟစနစ်၏ချိတ်ဆက်သဘာဝပေးသော, ပြည့်စုံသဘာဝကျပါတယ်ကဗီဒီယိုပစ္စည်းများအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုအားထား။ ဒီနေရာတွင်ယနေ့သင့်ရဲ့ Apple က TV ပေါ်မှာ install လုပ်သင့်တယ်သင်ယူဘို့ခုနစျပါးအကြီး apps များဖြစ်ကြသည်။
Lynda - ပညာရှင်များအတှကျသငျခနျးစာ
သငျသညျ LinkedIn တို့ဝယ်သူကလူကနေ။
ဤတိုတောင်းစုဆောင်းခြင်းမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်, LinkedIn တို့ရဲ့ Lynda.com ကနေ app ကို iOS, photoshop များအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင် app ကိုတည်ဆောက်ခြင်း, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု coding ကနေအရာအားလုံးထဲမှာ 4700 ကျော်သင်တန်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးစွမ်းသည် - Apple က-related သည့်အကြောင်းအရာများပင်ကြီးမားသောအကွာအဝေး။ , Programming ၏ဖောင်ဒေးရှင်းအွန်လိုင်းစျေးကွက်အခြေခံစည်းမျဉ်း: သင်က Apple TV ပေါ်မှာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်တချို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့သင်တန်းများပါဝင်သည်အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့် Wordpress ကိုမရှိမဖြစ် Trainin ဂရမ်ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏထက်ပိုရှိပါတယ်။ (ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့ subscription ကိုအခကြေးငွေသက်ဆိုင်ပါသည်။ )
Coursera - ကြီးထွားလာစိတ်ထဲသည်ဂရိတ်ဆရာများ
အွန်လိုင်းသင်ယူမှုနှင့်အတူသင်၏ CV Upskill ။
Coursera အားလုံးရရှိနိုင်ပါချိတ်ဆက် platform များမှတဆင့်၎င်း၏သင်တန်းများကမ်းလှမ်းဖို့လုံးဝတာဝန်ယူနှင့်ကုမ္ပဏီ Apple ကတီဗီထဲမှာအနေအထားကိုယူဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားလည်းပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြောင်း, သင်သည်အကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျယ်ပြန့်သင်တန်း catalog browse ပို့ချချက်, ပြည့်စုံဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများနှင့်တာဝန်ကျစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Coursera လက်မှတ်များဝင်ငွေအပေါင်းတို့, သင့်ကိုယ်ပိုင်တွင်းထဲကနေသကဲ့သို့သင်တို့ကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသည့်အခါနိုင်ပါတယ်။ (အခမဲ့, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အခကြေးငွေလျှောက်ထား) ။
TED ကိုဆွေးနွေးပွဲ - သင်၏စိတ် Feed
TEDTalks တစ်ဦးသင်ယူမှုပံ့ပိုးပေးမဖြစ်နှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပူဇော်ဘူးနေစဉ်, ဧကန်အမှန်လမ်းကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကမ္ဘာ့အထူးချွန်ဆုံးလူတွေကထင်အချို့အသိအမြင်အသစ်ဖွင့်ကောက်နှင့်အသစ်သင်ယူဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းထောက်ပြဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် အမှုအရာ။ Apple ကတီဗီမှာကို TED Talk ကိုဒီနေ့သင်လိုအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေတဲ့အကျယ်လက်လှမ်းလမ်းပေး, ဒါကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ သင်, ဆွေးနွေးပွဲတက် Cue ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ဖွင့်စာရင်းများကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မယ့်အရာ၏အများဆုံးစာတန်းထိုးနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ရရှိနိုင်နိုင်ပါတယ်။ (အခမဲ့) ။
TouchPress - Amazing ဂီတ
ဤသည်ကို Apple TV ကို App ကိုအတူဂီတသည်တစ်ဦးကရီးရဲလ်စိတ်ကိုရယူပါ။
အဆိုပါထူးခြားသော TouchPress app ကိုသင်သံစုံတီးဝိုင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကစားနှင့်ထူးခြားသော NoteFall အင်္ဂါရပ်ထားတဲ့ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီဖို့ရန်စည်းချက်မြေပုံအပါအဝင်မျက်နှာပြင်နှိမ့်ချဂီတသင်္ကေတစာလိပ်များ, စဉ်ဂန္ထဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုနားထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပြုနေချိန်တွင်ဂီတသင်္ကေတအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ, ကစားသကဲ့သို့သင်တို့ဂီတလိုကျလြှောကျနိုငျဆိုလိုသည်။ လစဉ်သတင်းလွှာမှ Subscribe နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလစူးစမ်းလေ့လာမယ့်လတ်ဆတ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လက်ခံရရှိသည်။
Skillshare - သင်မဘာသင်ယူ, သင်သိဘယ်အရာကိုမျှဝေပါ
Check အသံ: DIY အသံ၏ Essentials လူငယ် Guru နှင့်အတူရောစပ်။
ဖန်တီးမှုဘာသာရပ်များ၏ကျယ်ပြန့ဖြတ်ပြီး self-ပွေးညီကျူရှင်အများစုအတန်းတစ်နာရီအောက်မှာခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအခြေခံအားဖြင့်ဒီကဖန်တီးသင်ပေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းများအဖြစ်အခြားလူများအနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူရန်အဖွဲ့ဝင်များအားပေးဆိုလိုတယ်,a"ကိုဖန်တီးသူများအတွက်သင်ယူမှုအသိုင်းအဝိုင်း" အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြသည်။ ဒါကမရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာမတူကွဲပြားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကောင်းပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကလက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခြားနေရာဦးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Skillshare ထို့နောက် $ 9.99 / လတစ်လအခမဲ့အစမ်းအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းလျှောက်2- သင်ဟာ Amazing Be ပါလိမ့်မယ်
သင့်ရဲ့နေအိမ်၏နှစျသိမျ့ မှစ. အာကာသစူးစမ်းပါ။
အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ဦးကအကြီးလမ်း, နေရောင်ခြည်လမ်းလျှောက်2ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေဝန်းရံသမျှသောဂြိုဟ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အပြန်အလှန် 3D လမ်းပေးပါသည်။ ဒါဟာဂရပ်ဖစ်ကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံများ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီး, ဂြိုဟ်လေထုနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်ခါးပတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးပါတယ်။ သင်ပင်အာကာသနှင့်အချိန်မှတဆင့်လှန်နိုင်ပါတယ်။ developer များ Vito နည်းပညာလည်းရရှိနိုင်သည့်ကောင်းချီး Starwalk app ကိုဖွံ့ဖြိုး။ In-app ကိုဝယ်ယူမှု $ 2.99 ။
လက်မှုပညာ - ကို Creative Get ယနေ့တွင်
Craftsy ကြီးမားတဲ့မြောက်မြားစွာယာဉ်-related အကြောင်းအရာများ spanning အတန်း၏အကွာအဝေး, ဂွမ်းစောင်ပြုလုပ်ခြင်း, အပ်ချုပ်, ဇာထိုး, ကိတ်မုန့်အလှပြင်ဆင်ရေး, အနုပညာ, ဓာတ်ပုံပညာ, ချက်ပြုတ်နှင့်များစွာသောပိုပြီးအမျိုးအစားပေးထားပါတယ်။ သင်ခန်းစာများ, လွယ်ကူသော-to-အတိုင်းလိုက်နာကြသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သင်အလွယ်တကူပြန်သင်တစ်ဦးအကြာတွင်နေ့စွဲမှာအပေါ်စစ်ဆေးချင်အရေးကြီးသောအကြံပေးချက်များရကူညီရန် bookmark လုပ်ထားတဲ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းစာရွက်နှင့်စီမံကိန်းအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူယာဉ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်လင့်များရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ free download, လူတန်းစားစျေးနှုန်းများကွဲပြား
ဤရွေ့ကားခုနစ်ခုက Apple TV ကို apps များကပဲစတင်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပညာရေးဆိုင်ရာသင်ယူမှုအပေါ်မှာပိုပြီးဝန်ထမ်းသင်တန်းနှင့်သနျးပေါငျးမြားစှာအပျေါသုံးစွဲကျော် $ 177 ဘီလီယံခန့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်အကွာအဝေးသင်ယူမှုပစ္စည်းများများအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုမျှဝေဆည်းပူးရန်လိုအပ်ကြောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လာသည်အဖြစ်အကြီးအကျယ်ပွင့်လင်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများလူအများစုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကို၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုက Apple TV ကိုကဘာလဲ?
Apple ကတီဗီမှာ Watch မှကောင်းတစ်ခုခုကိုရှာပါဖို့ကိုဘယ်လို
အန်းဒရွိုက် OS ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: အစွမ်းထက်စိတ်ကြိုက်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ
Apple ကတီဗီမှာအမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို Watch လုပ်နည်း
Apple ကတီဗီနှင့်အတူ AirPlay ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ထိပ်တန်း9iPhone ကိုဖုန်းမြည်သံ Apps ကပ
အိုင်ပက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Lego အားကစားပြိုင်ပွဲ
Weight Watchers မိုဘိုင်း iPhone ကို App ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Temple Run2သိကောင်းစရာများနှင့် Powerups
10 နည်းလမ်းများအဆိုပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကျိုးရှိသင်က Keep နိုင်သလား
သင့်ရဲ့ iPhone ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်အလုပ်လုပ်မပါသောအခါအဘယျသို့ပွုကွဖို့
Instagram ကိုအပေါ်တစ်ဦး Shoutout Get5သိကောင်းစရာများ
အဘယ်အရာကိုအင်တာနက်ကလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုရှိပါသလားနှင့်သူတို့ကဘယ်မှာ မှစ. လာကြသလား
Bloglines - အခမဲ့ Web-အခြေပြုတဲ့ RSS News Feed တွေကို Reader ကို
ဂိမ်းများ Play မှထိပ်တန်းအခမဲ့
သင့်ရဲ့ကလေးများနှင့်အတူ Play ဖို့ခြောက်အကောင်းဆုံး Wii ဂိမ်းများ
သင်ကဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း (DRP) Have သလား?
Web ကိုကို Safe စာလုံး stack
In-App ကို Making Kids မှကို Safe တို့ဝယ်ယူ
သင့်ရဲ့ကားသို့မဟုတ် Truck ကားများအတွက်ညာ Amp ရွေးချယ်ခြင်း
20 နေရာလေးကို Raspberry Pi ကို terminal command Beginners များအတွက်
Xbox Live ဆိုတာဘာလဲ
Web ကိုဆိုဒ်များဖို့ .doc သို့မဟုတ် .txt ဖိုင်တွေကိုထည့်သွင်းနည်း
ကျောင်းသားများ9တင်ပြသိကောင်းစရာများ
လမ်းကြောင်း - Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် - Unix စစ်ဌာနချုပ်